बिरालोले बाटो काट्दा किन अशुभ मानिन्छ ? यस्तो छ यथार्थ ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/बिरालोले बाटो काट्दा किन अशुभ मानिन्छ ? यस्तो छ यथार्थ !
पुराण अनुसार बिरालोलाई देखिनु, बाटो काट्नु, रुनु र घरमा आउनु-जानु अशुभ मानिएको छ । बिरालोले घरमा नकारात्मक ऊर्जा ल्याउने गर्दछ । त्यसैले बिरालोलाई घरमा पाल्नु अशुभ मानिन्छ । बिरालो आउदा अशुभ घटनातर्फ इशारा गर्ने गर्दछ ।
जानकारीको लागी मध्य युगमा यसलाई चुडेलको सहायक पनि मानिने गरिन्थ्यो । यसको अलावा यस्तो पनि मान्यता रहेको छ कि यदि बिरालो तपाइको अगाडिबाट टाढा जान्छ भने सम्झनुहोस् तपाइको राम्रो समय चलिरहेको छ । यस्तै यूरोपको कैयौं भागहरुमा कालो बिरालो देखिनु अशुभ मानिन्छ ।